Mogadishu Journal » Dowlada oo xil ka qaadis iyo Shaqo joojin ku sameeneysa Masuuliyiin iyo saraakiil ciidan
Muqdisho:-Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in madaxda Dowlada federaalka Soomaaliya ay qorsheenayaan in xil ka qaadis iyo shaqo joojin lagu sameeyo masuuliyiin iyo saraakiil taageeray musharaxiinta mucaaradka .
Masuuliiyinta laga yaabo in xilka laga qaado ayaa waxaa ku jira Gudoomiyaal degmo , kuxigeeno iyo masuuliyiin kale oo katirsan dowlada oo si cad iyo si hoose u taageeray ciidamada Badbaado qaran ee ka hor yimid mudo kororsiga.
Waxaa sidoo kale iyana la filayaa in xil ka qaadis iyo shaqo ka joojin lagu sameeyo saraakiil katirsan ciidanka dowlada oo ku biiray ciidamada taabacasn musharaxiinta mucaaradka iyo kuwa kale oo sameeyay amar diido .
Qorshayaashan ay wado dowlada Soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa in ay uga sii darto xaalada magaalada Muqdisho gaar ahaan abaabulka ay wadaan ciidamada Badbaado Qaran oo ka biyo diidan in ay dib ugu laabtaan furumaha dagaalka.
Saraakiisha iyo ciidamada Badbaado qaran ee furumaha dagaalka kasoo baxay ayaa ka cabsi qaba hadii ay dib ugu laabtaan ciidanka dowlada in ay la kulmaan shaqo ka fariisin xarig iyo in laga joojiyo xaquuqda ay heli jireen.
Golaha midowga musharaxiinta ayaana uga digay dowlada Soomaaliya in ay beegsi gaar ah ku sameeso ciidamada badbaado qaran ee kahor yimid mudo kororsiga dowlada dagaalna la galay ciidanka dowlada .
(Sawirro) Wafdigii Qatar & xubno ka tirsan Musharaxiinta oo caawa ku shirsan Muqdisho